श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सुझाव
झापाका चिया मजदुर नेताहरूले चिया मजदुरका समस्या समाधान गर्न श्रम ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । संवाद समूहको संयोजनमा बिर्तामोडमा भएको चिया मजदुरका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा भएको छलफलमा सहभागी झापाका चिया मजदुर नेताहरूले राजपत्र जारीमा ढिलाइ भएको तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । चिया मजदुरका प्रतिनिधि, चिया उद्योग व्यवस्थापन पक्ष र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा राजपत्र जारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
झापाका चिया मजदुर नेताहरू श्रम ऐन अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । चिया उद्योगीहरू भने श्रम ऐनअन्तर्गत छुट्टै चिया नियमावली बनाएर कृषि उद्योगको रुपमा रहेको चिया क्षेत्रलाई सहज बनाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । चिया मजदुर नेताहरूले श्रम ऐनमा मजदुरको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था रहेकाले दुर्घटना बिमाअन्तर्गत थप तीन लाखको बिमाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । अहिले दैनिक २ सय ७८ रुपैयाँ ज्याला बुझ्दै आएका मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयन भए दैनिक ५ सय रुपैयाँ ज्याला, थप १० प्रतिशत सञ्जय कोष र ८.३३ प्रतिशतको उपदान रकम पाउने छन् ।
त्यस्तै मासिक तलबी मजदुरले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । चिया मजदुरले धेरै जोखिम र कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै समस्या आएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश नं. १ का इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताए ।
जिफन्ट प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले कतिपय उद्योगीले उचित ध्यान नदिँदा चिया बगान धरासायी बन्दै गएको र चिया मजदुर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले चिया उद्योगीले ध्यान दिने हो भने चियाको गुणस्तर बढाउन सकिने र उद्योगको अवस्था राम्रो हुने स्पष्ट पारे ।
नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रका मजदुरको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
चिया बगान र उद्योगमध्ये सवैभन्दा बढी शोषण र पीडा नेपाल चिया विकास निगमका मजदुरहरूले बेहोर्नुपरेको मजदुर नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले श्रम ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत बताए । देशभर ५० हजार र झापामा मात्र ३० हजार चिया मजदुर रहेको बताइएको छ ।